पार्टी/गुट परिवर्तन: माओवादीमा मालामाल, एमालेमा बेहाल – Setosurya
कृष्णबहादुर महरालाई सभामुख बनाउने निर्णयसँगै २५ फागुनमा माओवादी केन्द्रले देब गुरुङलाई संसदीय दलको नेता बनाउने निर्णय गर्‍यो। गुरुङ अघिल्लो बर्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ नेतृत्वमा मोहन बैद्य ‘किरण’ नेतृत्वको क्रान्तिकारी–माओवादी त्यागेर माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्नेमध्येका एक अगुवा नेता थिए।
त्यो हो, पार्टी वा गुट परिवर्तन गर्नेहरु माओवादी केन्द्रमा मालामाल भएका छन्। निर्वाचनमा होस् वा त्यसपछि, एकता वा ध्रुवीकरणको नाममा माओवादी केन्द्रमा आउनेहरुले राम्राराम्रा अवसर पाएका छन्। तर, यही स्थिति एमालेमा भने छैन। अवसरका लागि गुट परिवर्तन गरेकाहरुले माओवादी केन्द्रमा जस्तो अवसर पाएका छैनन्।
यस्तो छ बिराटनगर महानगरको प्रतिस्पर्धा, कसले लगाउला बिजयको माला ?
राप्रपा अध्यक्षमा कमल थापा निर्वाचित
किन रोक्यो एमालेले सबै जनवर्गीय संगठनको अधिवेशन ?
“गोल्डेन पुलिस” एसएसपी श्याम खत्रीले दिएको बयानले प्रहरी भित्र तनाव, क-कसको लिए नाम ?
मुग्लिन सडक थुनियो, अर्कै बाटो प्रयोग गर्न सार्वजनिक अपिल
एमाले-माओवादीको भागबन्डा; कुन जिल्लामा कसले कति पाउँदैछन् ?